လူတိုင်းအတွက်၊ ကွာရှင်းခြင်းသည်အဓိကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေများသည်သင်၏အကြံဥာဏ်များဖြင့်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။ ကွာရှင်းမှု၏ပထမခြေလှမ်းမှာကွာရှင်းမှုရှေ့နေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွာရှင်းခြင်းကိုတရားသူကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးရှေ့နေမှသာကွာရှင်းမှုအတွက်လျှောက်လွှာကိုတရားရုံးသို့တင်ပြနိုင်သည်။
လူတိုင်းအတွက်၊ ကွာရှင်းခြင်းသည်အဓိကဖြစ်ရပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေများသည်သင်၏အကြံဥာဏ်များဖြင့်သင်၏ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိသည်။
> ကွာရှင်းရှေ့နေနှင့်ချိန်းဆိုချက်တစ်ခုလား။ ဤသူသည်သင်တို့ကိုပြင်ဆင်ပုံကို!
ကွာရှင်းမှု၏ပထမခြေလှမ်းမှာကွာရှင်းမှုရှေ့နေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွာရှင်းခြင်းကိုတရားသူကြီးကထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးရှေ့နေမှသာကွာရှင်းမှုအတွက်လျှောက်လွှာကိုတရားရုံးသို့တင်ပြနိုင်သည်။ ကွာရှင်းမှုဆိုင်ရာတရားသူကြီးများကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်မည့်တရားရေးဆိုင်ရာရှုထောင့်အမျိုးမျိုးရှိသည်။ ဤဥပဒေရေးရာရှုထောင့်ဥပမာများမှာ
• အကယ်၍ တစ်လလျှင် alimony ပမာဏမည်မျှရှိသနည်း။
• အကယ်၍ သင့်တွင်ကလေးရှိပါကကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကိစ္စရပ်များကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းမည်နည်း။
ကွာရှင်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောရှုထောင့်များရှိသည်။ ထံမှကွာရှင်းရှေ့နေ Law & More ဒီရှုထောင့်များကိုတတ်နိုင်သမျှစီစဉ်ခြင်း၌သင့်ကိုကူညီလမ်းညွှန်ပေးနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်မိသားစုဥပဒေနယ်ပယ်တွင်အထူးပြုသည်။ မင်းအတွက်မင်းဘာလုပ်ပေးနိုင်မလဲသိချင်လား ဆက်သွယ်ပါ Law & More.
သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးပြီ။ မင်းကကွာရှင်းလိုက်ပြီ ဒါပေမယ့်နောက်ဘာလဲ ဒီကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတဲ့နောက်မှာပထမ ဦး ဆုံးအရေးကြီးတဲ့ခြေလှမ်းကကွာရှင်းပြတ်စဲသူရှေ့နေကိုခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကွာရှင်းပြတ်စဲမှုပြီးဆုံးသွားသောအခါလက်တွေ့တွင်သာမကဥပဒေရေးရာပြissuesနာများလည်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဥပမာ - သင်၏ပူးတွဲအိမ်နှင့်အပေါင်စာချုပ်များသည်မည်သို့ဖြစ်မည်နည်း။ သင်၏ငွေစုနှင့်ဘဏ်စာရင်းများမည်သို့ဖြန့်ဝေမည်နည်း။ သင်၏ကလေးများအတွက်နေ့စဉ်သို့မဟုတ်ငွေရေးကြေးရေးအရမည်သူကိုဂရုစိုက်မည်နည်း။ ကွာရှင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဥပဒေရေးရာပြallနာများအားလုံးကိုစီစဉ်ခြင်းနှင့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်ရန်သင့်အားတတ်နိုင်သမျှကူညီနိုင်ရန်အတွက်သင်၏ကွာရှင်းမှုဆိုင်ရာရှေ့နေသည်လိုအပ်သောအချက်အလက်များနှင့်စာရွက်စာတမ်းများအားလုံးရှိရန်အရေးကြီးသည်။
သင်၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်အရေးကြီးသည့်ကိစ္စရပ်များကိုသင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့်ဆွေးနွေးရန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ပူးတွဲအိမ်၊ ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေနှင့်သင်၏ဖြစ်နိုင်သောကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ ကွာရှင်းပြီးနောက်အနာဂတ်ကိုသင်မည်သို့မြင်သနည်း။ ချိန်းဆိုခြင်းမပြုမီသဘောတူစာချုပ်ရှိလျှင်၊ ဥပမာသင့်အိမ်နှင့်နေ့စဉ်စောင့်ရှောက်မှုနှင့်သင်၏ကလေးများနှင့်ဆက်သွယ်မှုရှိပါကပူးတွဲကွာရှင်းပြတ်စဲရေးရှေ့နေသည်၎င်းသဘောတူညီချက်များကိုကွာရှင်းခြင်းနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းမှုအစီအစဉ်တွင်အလွယ်တကူလျင်မြန်စွာမှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။
သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းနှင့်အတူတကွဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ပြုလုပ်ရန်မဖြစ်နိုင်ပါလား။ ထို့နောက်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောရလဒ်ကိုရရှိရန်ကြိုးပမ်းမည့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ကွာရှင်းမှုရှေ့နေကိုသင်ခေါ်နိုင်သည်။ ထိုကိစ္စတွင်သင်၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေနှင့်တွေ့ဆုံရန်ပြင်ဆင်ရာတွင်မည်သည့်အရေးကြီးသောပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းရန်နှင့်မည်သည့်နည်းဖြင့်သင်ကိုယ်တိုင်မေးမြန်းရန်အကြံပြုလိုသည်။ ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်အိမ်တွင်ဆက်လက်နေထိုင်ပြီးသင့်ကလေးများကိုနေ့စဉ်ဂရုစိုက်စောင့်ရှောက်လိုပါသလား။ ဒီကိစ္စမှာကွာရှင်းပြတ်စဲသူရှေ့နေကသင့်ကိုဘာတွေစီစဉ်သင့်တယ်၊ ဘယ်လိုစီစဉ်သင့်တယ်ဆိုတာကိုအတိအကျပြောပြနိုင်ပါတယ်။
•သင်ဟာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး လား။
အရေးကြီးသောစာရွက်စာတမ်းများစုဆောင်းပြီးကွာရှင်းရှေ့နေနှင့်သင်၏ချိန်းဆိုမှုသို့ရောက်ရန်အရေးကြီးသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်သင်သည်သင်၏လက်ထပ်ထိမ်းမြားစာအုပ်သို့မဟုတ်အတူနေထိုင်ရန်သဘောတူညီချက်နှင့်ကြိုတင်မထားသည့်သဘောတူစာချုပ်ကိုယူဆောင်လာရန်လိုအပ်သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများသည်ရှေ့နေအားသင်၏နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းများအားတရားဝင်အနေအထားကိုထိုးထွင်းသိမြင်စေပြီးနောက်ထပ်သဘောတူညီချက်များအတွက်အစဖြစ်သည်။ သင်နှင့်သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတွင်အတူတကွ (ငှားရမ်းထားသော) အိမ်ရှိပါသလား။ ထိုသို့ဖြစ်ပါကသင်၏ပေါင်နှံစာချုပ်သို့မဟုတ်ငှားရမ်းခြင်းဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုကိုအစည်းအဝေးသို့ခေါ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ငွေရေးကြေးရေးအခြေအနေသည်ကွာရှင်းမှုအခြေအနေနှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်။ သင်၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေကိုသင်၏ဘဏ်စာရင်းများနှင့် / သို့မဟုတ်ငွေစုစာရင်းများ၊ နှစ်ပတ်လည်ထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်နောက်ဆုံးဝင်ငွေခွန် ၃ ခုကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်သင်၏ပင်စင်၊ အာမခံနှင့်သင်အကြွေးတင်မည့်သတင်းအချက်အလက်လည်းအရေးကြီးသည်။
ကလေးများပါ ၀ င်သည့်အခါသူတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုလည်းထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည်။ ဤလိုအပ်ချက်များကိုစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအနေဖြင့်တတ်နိုင်သမျှထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့သေချာပါသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ကွာရှင်းမှုရှေ့နေများသည်သင်နှင့်အတူမိဘအုပ်ထိန်းမှုအစီအစဉ်ကိုရေးဆွဲနိုင်သည်။ ပေးဆောင်ရမည့်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိမည့်ကလေး၏ကလေးပမာဏကိုလည်းတွက်ချက်နိုင်သည်။
သင်သည်ကွာရှင်းပြီးသားဖြစ်သလော၊ ဥပမာ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်သို့မဟုတ်ကလေးစရိတ်အပေါ်လိုက်နာမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ပaိပက္ခရှိပါသလား။ သို့မဟုတ်သင်၌သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုဂရုစိုက်ရန်ငွေကြေးအရင်းအနှီးများလုံလောက်ပြီဟုယုံကြည်ရန်အကြောင်းပြချက်ရှိပါသလား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကွာရှင်းပြတ်စဲသည့်ရှေ့နေများသည်ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်သင့်အားတရားဝင်အကူအညီများပေးနိုင်သည်။
မင်းမှာကိုယ်ပိုင်ကုမ္ပဏီရှိသလား၊ ကွာရှင်းနေပြီလား။ ထိုအခါသင်သည်အကောင့်ထဲသို့အပိုရှုထောင့်ကိုယူရန်ရှိသည်။ ငါတို့နှင့်ကွာရှင်းထားသောရှေ့နေများနှင့်သင်နှင့်အတူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမည့်မေးခွန်းများတွင် -